I-Semalt ibonisa ukunyanzelisa iikhompyuthela ze-CTA Isikhokelo
Xa uqhuba i-e-yorhwebo, ukulungiswa komxholo wewebhusayithi ngokulungileyoUkubonakala kweenjini zokukhangela kuyimpawu ebalulekileyo. Iinkampani ezininzi ziye zaphumelela kwi-intanethi ngokusetyenziswa kwe-SEO kunye nezinye idijithaliizicwangciso zokuthengisa. Izinto ezifana nokukhethwa komxholo kunye nokulungiswa kweempawu kubalulekile ekuqaliseni indlela iphepha lewebhu eliza kuziphatha ngayokwi-SERP - ejector calculation. Ukulandela ukuhlaziywa kwe-Google algorithm kaJanuwari 2017, iimeko ezinikezwa yiGoogle namhlanje zinomxholoukufaneleka, ubuhlobo obuphathekayo kunye namava omsebenzisi.
Kwimeko yamava omsebenzisi, uMax Bell, uMphathi weNtengo kaMthengi Semalt IiNkonzo zeDivithali, zicebisa oku okulandelayo:
Uyilo lwewebhu olulungileyo kwiso lomsebenzisi.
Ukunciphisa ukuhamba (ukuya kwingcamango ephambili).
Isiqulatho esifanelekileyo kwisisombululo somsebenzisi okanye isidingo.
Ngokwale miba, amava okusebenzisa i-website kufuneka abe yintlokoukuxhalabisa xa uququzelela umxholo wewebhu. Ngenxa yoko, imisebenzi ye-CTA yenza isidingo esikhulu sokuqwalasela indawo yokubeka iifowuni ezibalulekileyo. NgokubaNgokomzekelo, amaqhosha okubizela ukuya kwi-action. Eli qhosha likhuthaza isivakashi ukuba senze umsebenzi obalulekileyo kwikhasi lewebhu njengento yokuthenga, bhalisaokanye ukukhuphela. Ungasebenzisa izicwangciso ezingezantsi ukwenza u-CTA ukubekwa ngumsebenzi onzima:
Ukubekwa kwe-CTA kufuneka kuhambelane noyilo lwephepha lewebhu. UX kufunekauhlale uhlelekile njengendlela enokwenzeka ngayo kunye neCTA..Ezinye izicwangciso ziyakuthanda ukubeka iqhosha elingentla ngentsimbi kunye nabanye ngaphantsi kwalo. KwezinyeKwiimeko, iphepha lewebhu elide liquka i-CTA kwingxenye ephezulu kunye nezantsi. Amaphepha ewebhu amancinci anqamle izikhundla zokubeka umnxebaiqhosha lezenzo.
2. Ideskithophu kunye namaziko eselula
Ngokwe-update kaJanuwari, i-Google iya kubhala ingqaleloubuhlobo obuhambahambayo bewebhu. Xa ukwenza i-SEO, kukho izixhobo ezithile zokuyila ezifake kwifowuni yeselula kwaye andinayokwi desktop. Ngokomzekelo, ubude bomxholo. Ngokomphando, abaninzi abasebenzisi bedesktop bakhetha inkinobho ye-CTA ephantsi. Kwiisifundo esifanayo, abantu bakuthola kulula ukwenza isenzo se-CTA kwisixhobo esicatshulwa ngokukodwa xa iqhosha le-CTA liphezulu kwiphepha.
3. Icala lasekhohlo okanye elisekunene
Kwiimeko ezininzi (ukuba akunjalo konke), iifowuni zezenzo ziyakhonza abathengixa kwimeko efanelekileyo yephepha lewebhu. Ngokutsho kwezinto ezibonakalayo, umsebenzisi, sitsho i-shopper, uzakuchofoza iphepha ekupheleni okanye phezulu kwesokudlaekhoneni. Olu qulunqo luthanda abantu abaqhuba uphuhliso lwewebhu. I-Smartphones inomdla woluntu ngokubeka imenyu ngakwesobunxele, evumelaukubeka iqhosha lokudlala.
Xa wenza i-e-yorhwebo, iinkalo ezikhethekileyo ze-web design SEO kunye neqhoshaukubeka badlale indima ebalulekileyo. I-website elungileyo kufuneka ikwazi ukuguqula isivakashi kumthengi ngemida ephambili yesiza. Xaumnqamle unqakraza ikhonkco yakho, inkqubo ye-AIDA (Inkathalo - Intswelo - Isifiso - Isenzo). Le nkqubo iya kukukhokela kwiindawo oza kuzoufake iifowuni eziyimfuneko ezifana neefowuni ze-Call-to-Action. Iifayile ze-CTA zinokuhlala kwindawo ebonakalayo kwiphepha lakho lewebhu. Ezi ndawoziquka iinkalo ezinjengekhasi okanye kwindawo efanelekileyo yabasebenzisi baselula. Ikhonkco engajonganga ngqo ingenza ulahlekelwe luxabisekileyoizithuthi, ukulimaza imizamo yakho ye-SEO. Ukusebenzisa izicwangciso zokubeka i-CTA, ukuguqulwa kwakho kunokwandisa kakhulu.